एनआइसी एसियाको बोनसमा मूल्य समायोजन, हेर्नुस् कतिमा खुल्छ कारोबार ?
ARCHIVE, MARKET WATCH » एनआइसी एसियाको बोनसमा मूल्य समायोजन, हेर्नुस् कतिमा खुल्छ कारोबार ?
काठमाडौं - एनआइसी एसिया बैंकको २०% बोनसमा नेप्सेले मूल्य समायोजन गरेको छ । एनआइसी एसियाको २०% बोनस पछिको भाउ ३६८ रुपैयाँ कायम भएको छ । यसको औसत आधार मूल्य भने ४६५ रुपैयाँ हो । अब नेप्सेमा कारोबार खुल्दा एनआइसीको पहिलो कारोबार ३६८ रुपैयाँमा हुनेछ । एनआइसीले भदौ ३० गते हुने वार्षिक साधारण सभामा २०% बोनस र कर तिर्न १.०५% नगद लाभांश दिने प्रस्ताव गर्न लागेको हो ।
यसका लागि बैंकले शुक्रबारदेखि बुक क्लोज गरेको हो । हाल एनआइसी एसियाको चुक्ता पुँजी ६ अर्ब ६९ करोड २५ लाख ९७ हजार रुपैयाँ छ । २०% बोनसपछि चुक्ता पुँजी ८ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ ११ लाख १६ हजार रुपैयाँ पुग्नेछ । एनआइसी एसिया बैंकले गत आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ४६ करोड ९६ लाख ७२ हजार रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ । बैंकको प्रतिसेयर आम्दानी २२ रुपैयाँ र प्रतिसेयर नेटवर्थ १५२ रुपैयाँ १५ पैसा छ ।
प्रकाशित : Friday, September 01, 2017